နမူနာအချိန်:အဘယ်ကြောင့်တည်ရှိနေပေသည်။ အလုပ်သမားဥပေဒအတွက် ၂၀၁၉ - ဂျာမန်ရှေ့နေကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ အကြီးဆုံးဥပဒေရေးရာတယ်။
အဆိုပါအလုပ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုး၊အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူ၎င်း၏စိန်ခေါ်မှုများ၊အဖြစ်ကောင်းစွာ"အဖြစ်ဆိုး"အစမ်းကာလ။ အထူးသဖြင့်ဆိုရင် အဲဒါကိုမှကြွလာသောအသိပေးစာများ၏ရပ်စဲ၊အထပ်တစ္ဆေ၊ဤအချိန်တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်သော။ သို့သော်၊သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုအများကြီးပိုပြီးဝေး-ရောက်ရှိ။ အစမ်းသပ်ကာလအဆင့်နစ္၊သင့်သောအခါနှစ်ဦးစလုံးမှအလုပ်ရှင်နှင့်ဝန်ထမ်းများ၊နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးလည်းအသုံးပြုသည်။ အောက်ပါလမ်းညွှန်သင်တွေ့လိမ့်မည်အချက်အလက်အကြောင်းရှိမရှိ ကာလအမြဲတမ်းအလုပ်အတွက်အရေးတူလှပါတယ်ကားအဘယ်သို့နှင့်အတူအားလပ်ရက်အတွက်အချိန်နှင့်မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်လျှင်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အ ကာလ။ တစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးကာလအမကြာခဏစိတ်အပိုင်းများတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်စာချုပ်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊များအတွက်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏ကာလမည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းစည်းမျဉ်းများ၊ပြည်နယ်အလုပ်လုပ်သောကားများအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ။
သင်အပ္ပါသည္။ ထို့ကြောင့်၊တစ်ဦးအလုပ်စာချုပ်နိုင်သဘောတူညီမပါဘဲတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ။ မေးခွန်းတွေအများကြီးမှကြွလာသောအခါသူက"နမူနာအချိန်"၊အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးဤအမှန်တကယ်ကြာ။ ဒါဟာသတိရဖို့အရေးကြီးကြောင်းသင့်မယူပိုပြီးထက်ခြောက်လအတွင်း။ေသတ္မွတ္အကန့်သတ်သည်ဤကာလ။ ဤအကြောင်းပြောရမဆိုသာသင့်ရဲ့ကန်ထရိုက်အလုပ်အကိုင်အဖယ္ျသဘောတူညီခဲ့ပြီးပါပြီ။ ထိုခြောက်လတာကာလအဖြစ်သင့်ထက်ကျော်လွန်နှင့်အတူသက်တမ်းအတွက်သမြင့်ဆုံးကန့်သတ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကာလ၏။ အတွက်သင်တန်း၊ဒီအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကြည့်ရှု။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဆိုအရအသက်မွေးလေ့ကျင့်ရေးအက်ဥပဒေရကြလိမ့်မည်စတင်အလ့က်စာချုပ်နှင့်အတူတစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ။ ဒါဟာဆုံးဖြတ်သောအ ကာလယူသင့်အနေဖြင့်သင်တန်း၏အမြင့်ဆုံးအထိလေးလ။ သင်အလိုအတိုကောက်အဖြစ်န်ထမ်းများအ ကာလ၊ဒီအပြုရပါမည်အားဖြင့်အပြန်အလှန်သဘောတူ။ ဒါကြောင့်သင့်စိတ်တွင်ဘွား၊ထို့အပြင်အထွေထွေအကွယ်ဆန့်ကျင်ပယ်သောသူကိုခြောက်လစောင့်ဆိုင်းကာလ။ တစ်လျှော့ချရေးအထူးသဖြင့်ရှိပါတယ်၊ဘယ်မှာအတွက်ပြီးသားအပြေးအထိအလုပ်သို့မဟုတ်အကြိုက်ပြီ။ အထူးသဖြင့်အစအဦး၏အလေ့ကျင့်ရေးဤကဲ့သို့သောဘုံဖြစ်ပါသည်။ လမ်းဖြင့်၊တိုးချဲ့နိုင်သည်နှင့်အညီသက္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားဥပေဒ၊အပးခ်ိန္စ ။ အထူးသဖြင့်ဆိုရင် ကာလသေးသက်တမ်းကုန်မမူ၊ဒါကြောင့်စေခြင်းငှါသဘောတူသည်တစ်ကြိမ်၊ဤအချိန်နောက်တဖန်အ၊ခ်ဲ(ကိစ္စအများစုအတွက်၊ကုမ္ပဏီအရွိန္အဟုန္နဲ)။ ဒီအလှည့်တွင်၊သာအတူညှိနှိုင်းတိုင်ပင်အလုပ္သ။ ဤအဆိုအရ§၆၂၂၏အရပ္ဖက္လူကုဒ်တစ်ဥပဒေကြောင်းအရလိုအပ်ချက်။ စုပေါင်းသဘောတူညီချက်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီသဘောတူညီစေခြင်းငှါမှလွဲ။ ထို့အပြင်ရော၊အလုပ်ရှင်နှင့်ဝန်ထမ်းများညာဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအစဲ။ အသုံးအများဆုံးမေးခွန်းတွေန်ထမ်းနှင့်ပတ်သက်။ ကာလအလှည့်အနာမကျန်း၊အားလပ်ရက်နှင့်ကိုယ်ဝန်။ အဘယ်အခွင့်အဤအမှုများတွင်။ ဘယ်ဟာကိုလေ့လာ။ ဘယ်ချွင်းတည်ရှိနိုင်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၊ကအကြောင်းသတိပြုသင်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းကဲ့သို့ဖြစ်၏အမှု၌ရောဂါ၊ကိုအောက်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများ:သင့်သူတို့ဖျားအစအဦးမှာအလုပ်၏ဤအမှုကိုပြုသောအားဖြင့်အာမခံကုမ္ပဏီ။ နေမကောင်းစဉ်အတွင်း ကာလတစ်ခုတိုးချဲ့ မူလစာခ်ဳပ္၌ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်။ အတွင်းကဂျာမန်အလုပ်သမားဥပဒေဂျာမန်ဖက်ဒရယ်အားလပ်ရက်လုပ်ဆောင်နေသည်အလားတူအစီအစဉ်အားလုံးအတွက်ဒီအစီရင်ပိုင်ခွင့်။ င်း၊ထိုဝန်ထမ်းအပြည့်အဝအားလပ်ရက်သာပြီးနောက်ခြောက်လအတွင်း။ သို့သော်၊သင်သည်လည်းထိုအယူ၌ပထမဦးဆုံးလအနည်းငယ်အတွင်းဝန်ဆောင်မှု၏။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပထမဦးဆုံး။ ကြောင့်အသီးအသီးလ-ပန်းသည်၏နှစ်ပတ်လည်နှုတ်ဆက်ပြီး။ တိုတောင်းတဲ့အားလပ်ရက်ကာလအတွင်းစမ်းသပ်ကာလအတွင်း၊ရပ်သို့အဘယ်အတွက်နည်း။ ဒါပေမယ့်သတိထားရ:ဖြစ်ရန်၏အပြင်ဘက်အစမ်းကာလကိုထွက်ခွာနိုင်၊တောင်းဆိုများအတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအကြောင်းရင်းများ၊အငြင်း။ တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ကတစ်ရွှင်လန်းသောအဖြစ်အပျက်နှင့်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်၊အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအမြင်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ရာတွင်အမျှော်လင့်ချက်များမိခင်စိုးရိမ်။ သို့သော်၊ထိုသို့သတိပြုသင့်ကြောင်းဤအမှုများတွင်၊အဆိုပါကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မိခင်စပ်။ ဤသည်တို့ပါဝင်သည်အလယ်တန်းအကိုင်အခွင့်တားမြစ်ထားသည်၊နှင့်အကာလအကာအကွယ်၊ဒါခေါ်သားဖွားစရိတ်၊အရာအစအ အလုပ်ရှင်ဖြစ်နိုင်ဥစ္စာ။ ကျွန်တော်ဟာအလုပ်ရှင်တစ်ဦးကတည်းက ၁၁။ ၁။ ၁၇ အပြည့်အဝ-အချိန်အများမပါဘဲရေးသားထားသောစာချုပ်(ထို့ကြောင့်သာနမူနာအချိန်)အဖြစ်တက္ကစီယာဉ်မောင်းလုပ်ကိုင်လေးယာဉ်မတော်တဆမှုခဲ့ပြီးခဲ့သည့်အတွက်နှစ်လနဲ့ခံစားကင်းကားမောင်းသည့်အခါ၊ငါရှင်းပြဖို့ကျွန်မရဲ့အကြီးအကဲပြောသူလိုငါ့ကိုမေးမြန်းဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီးပင်ကလည်း၊ငါ့အဘို့အနှစ်ပတ်အတွင်း'အသိပေးခြင်း။ တယ်ထို့နောက်ထိုနေ့ရက်တွင်၊အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်၊အတိအလွန်ကောင်းသောကုမ္ပဏီ၊ကျွန်တော်သဘောတူသည်၊သို့သော်၊အပေါ် ၃၀။ ၅။ ၁၇ စတင်နှင့်ငါ့အလုပ်ရှင်တစ်ဦးကြောင့်ငါအခမဲ့အနေအထားမှာ ၂၃။ ၅။ ၁၇ ဆိုသည်ဒီတော့အခုကျွန်မအလုပ်ရှင်တစ်ဦးမေးကိုလွှတ်ပေးသောကြောင့်အလုပ်ရှင်ခသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်ငါ့အအိပ်မက်ကိုအလုပ်ပြီးရချင်သောအခွင့်အလမ်းနှင့်အတူနှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်လွဲချော်ခံရဖို့မ။ အခုတော့အလုပ်ရှင်တစ်ဦးရှိတယ်ပြောသူဖြစ်ရကြည့်ရှုနိုင်လျှင်ငါ့ကိုအခမဲ့။ သူကပြောတယ်ဒီနေ့လည် ၂၄။ ၅။ ၁၇ သတိထားမိ၊သို့သော်၊ငါကသွားကြဖို့အစောပိုင်းနေ့ ၂၄။ ၅။ ၁၇ အသစ်စာချုပ်လျှင်သူ ငါ့ကိုမမရထားခဲ့၏မရှိခြင်း၊ငါအသစ်ကုမ္ပဏီအပြောအဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်တစ်ခုမှာအလုပ္အပေါ်အခွန်အတန်းခြောက်နှင့်အဖြစ်မကြာမီငါနောက်ကနေအလုပ်ရှင်တစ်ဦးအဖြစ်အတွက်အခွန်အတန်း ၁။ ပေးနိုင်ပါသည်။ နှစ်ခုသာအပြည့်အဝ-အချိန်အလုပ်အကိုင်များအဘို့အဖြစ်လိမ့်မယ်လို့နှစ်ပတ်အတွင်း။ ကျေးဇူးပြုပြီးအရေးပေါ်အကူအညီ။ မင်္ဂလာပါသေ၊သင်ပထမဦးဆုံးရှင်းလင်းရှိမရှိသင်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုနှစ်ပြည့်အဝ-အချိန်အလုပ်အကိုင်များ။ ဒါကြောင့်၊သင်ရှိသည်မယ်လို့အညီဒုတိယအလုပ်အကိုင်အများအားဖြင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အတန်း။။။။ မဂၤပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ယီစာချုပ်အထိ ၃၁။ ၈။ ၁၇။ ကျွန်မရဲ့မေးခွန်းကဤ:ငါစက်တင်ဘာလအတွက် ၂၀၁၅ ပြီးခဲ့တဲ့ခြောက်လ ကာလ။ မတ်လ ၂၀၁၆၊၁။ စက်တင်ဘာလအတွက် ၂၀၁၆၊၂။ မတ်လအတွက်အ ၂၀၁၇၊ငါ့ ၃ တိုးချဲ့အထိ ၃၁။ ၈။ ၁၇။ ဤသည်မည်ဖြစ်ကြောင်း။ ငါနှင့်အတူမကောင်းကြည့်နှင့်အတူပုံသေပြင်ဆင်ခြင်း၊အပေါ်အဖြစ်ကုမ္ပဏီ၏န်ထမ်းများအဘို့ရှာကြသည်။ ငါသည်အဘယ်သူမျှမပျောက်သို့မဟုတ်အနာရောဂါစွဲ။ မေတ္တာနှင့်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကြံဉာဏ်ဂၤလာအဆ၊သတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလအကိုင်စာချုပ်နှင့်အတူတရားဝင်အကြောင်းပြချက်ရှိနိုင်ပါသည်အသတ်မရှိတိုးချဲ့(မှဘာသာရပ်န့်သတ်)။၏ဖြစ်ရပ်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့-အခေါ်အဝေါ်စာချုပ်မပါဘဲရည်ရွယ်ချက်မှာဤအကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားပြုမူ:ဒီမှာ၊ထိုအချိန်ကန့်သတ်ချက်ထက်မပိုရကြလိမ့်မည်ကာလ၏နှစ်နှစ်။.
ထို့အပြင်ခုနှစ်၊အလုပ်ရှင်နှင့်အသင့်တိုးချဲ့အဆိုပါစာချုပ်ကသာလျှင်သုံးကြိမ်။ အကျိုးဆက်၊သင်ရှိသည်အမှုအရာမှန်သည်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါသည်ငါ့လက်ရှိအလုပ်ရှင်များအတွက် ၃၀။ ၀၉။ စဲ။ ထိုအတောအတွင်းတွင်၊ငါရှိသည်ဖို့ ၀၁။ ၁၀။ သစ်တစ်ခုအနေအထားအမျိုးမျိုး၏တူညီသောအလုပ်ရှင်(အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကွင်းလှုပ်ရှားမှု၏)။ အချက်အဘို့ဤသည်၊သို့သော်၊ကျွန်တော်တစ်ဦးရုံးတင်စစ်ဆေးကာလ။ အရကျွန်တော်တို့ရဲ့မှူဌာနအတွက်ပြန်လည်ရုံးတင်စစ်ဆေးအခါအတူညီတဲ့ကုမ္ပဏီမဟုတ်တရားဝင်တတ်နိုင်သမျှ။ အဘယ်သို့ငါရပါဘူး၊၀၁။ ၁၀။ ဒါပေမယ့် ၁၅။ ၁၀။ စတင်။ ငါတော့တိုက်ရိုက်မကိုင်ဆက်ဆံရေး၊ဒါပေမယ့်တစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်ဆက်ဆံရေး။ တစ်ချိန်ညှိနှင့်အတူနမူနာအချိန်ထိုအခါဖြစ်နိုင်။ ကျေးဇူးအများကြိုတင်မဲအတွက်များအတွက်အကူအညီ။ ဒါဟာတူညီတဲ့အလုပ်ရှင်လည်းတော့။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆက်သွယ်ဝန်ထမ်းရုံးသို့မေးမြန်းအဖြစ်အတိုင်းအတာအရာမှတစ်ဦးပြန်လည်ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ဒီလိုစိတ်ကူးရှိ။ မင်္ဂလာပါ၊ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်မခင်ပွန်းခဲ့စဲကနေသူ့အချိန်အလုပ်လုပ်ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၊၊ကောင်းကြီးမဟုတ်အလုပ်အတွက်သူ့ကို။ အတွင်းကာလကြာအဘို့အနှစ်ပတ်အတွင်း။ သူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်နှစ်လအတွက်ဒီကုမ္ပဏီ။ ယခုသူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်အရလစာ၊ပြီးကြည့်ရှုများအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်းကိုသတိထားမိကာလ၊သင်ရေတွက်ပြီးသူ့ကိုအကြွေးထားခဲ့ပေမယ့်၊သူသည်မေတ္တာတစ်ဦးအားလပ်ရက်။ ကြောင်း၊သူသာအရတစ်ပတ်လျှင်ဤအချိန်ကာလ၏အသိေလစာ၊အစားနှစ်ပတ်အတွင်း။ သူအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်အတွင်းကိုသတိထားမိကာလကြောင့်၊အဘယ်သူမျှမသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်။ ညာဘက်အလယ်အလတ်ဖြစ်ပါသည်။ အမိန့်များပုံမှန်မဖြစ်သင့်ထိခိုက်နစ်နာရန်အလုပ်သမားများ၏။ အမှုအတွက်သံသယ၊သင်သင့် ရှေ့နေတစ်ဦးအကိုင်အခွင့်အပညတ်တရား။ ပီ ၀၂။ ၁၀။ ၂၀၁၇ အခါငါ့လက်ရှိအလုပ်ရှင်စတင်ခဲ့ပြီးအခုစမ်းသပ်ကာလကအဆုံးသတ်မှကြွလာနှင့်ငါပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝန်ထမ်းစရိတ်မွလွန်းမြင့်မား။ ငါ့မေးခွန်းအဘယျသို့အားလပ်ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြသည်ငါခေါ်လျှင်ငါ၌အနှစ်သုံးဆယ်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးအားလပ်ရက်ရတဲ၊သင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲအလုပ္၊သုံးရက်ပတ်လုံးအားလပ်ရက်၊ငါ့ကန်စွန်းအပေါ် ၁၀။ ၀၃။ ၁၈ အသုံးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်လိုလားသူအဘို့အကဒီမှာဆယ်ရက်လုပ်-တဦးတည်း။ တောင်းဆိုချက်ကိုတုန့်ပြန်ကျေးဇူးအများကြီးကိုဟယ္လီပထမခြောက်လအတွင်းအလုပ်အကိုင်၊သင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတောင်းဆို၏စည်းကမ်းချက်များ၌အားလပ်ရက်။ အသီးအသီးတစ်လအတွက်လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်အနှစ်၏အအားလပ်ရက်ရက္။ မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်း၊ငါသည်ရှိသည်ပြီးနောက်လေးလအတွက်အလုပ်သစ်အတွင်း ကာလတွင် ၀၅။ ၁၁။ ၂၀၁၈၁၉။ ၁၁။ ၂၀၁၈ ဖျက်သိမ်း။ အဆုံး ၄။ အလုပ္ငါဖျားနာမကျန်း၊ခံစားခဲ့ရတဲ့သူမရဲ့နှင့်အပြင်၌ဤနောက်ဆုံးနှစ်ဦးရက်သတ္တပတ် နာရေး(အကျိုးဆက်အဖြစ်အနာရောဂါစွဲအလုပ်ကြောင့်ကျွန်တော်စမ်းပြီး)။ ယခုကျွန်တော်မေး:ငါ့အဖို့၊ေအာ့အန္၊အခြားအကိုးဆယ်ရက်အလုပ္၏။ ကြောင့်တောင်းဆိုမှုများမှအလုပ်ရှင်၊ငါအဖြေ၊နှင့်အညီအဆိုပါစာရင်းကိုင်၊သူကပေးဆောင်ရပါမည်၏အစိတ်အပိုင်းင့္အဖြစ်၍လည်းပေးဆောင်ရလူမှုဖူလုံရေးအခွန်ဘယ်လိုပဲငါ့၊ရှိပါတယ်မယ်ဆိုရင်၊အကောင်းဆုံးအခိုင်အမာ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ö ဟိုင်း ö၊အဥပဒေကြောင်းအရရွေးချယ်စရာရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်နိုင်၊သင်ရှင်းပြဖို့ရှေ့နေတစ်ဦးအကိုင်အခွင့်အပညတ်တရားမှာအကောင်းဆုံး။ ကျွန်တော်တို့လုပ်မပူဇော်ဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်။.
Consultarea Unui Avocat